Akakomborerwa Yin Yang Nhema Onyx uye Amai vaPearl Pendant (14K) - Popular Jewelry
Yin Yang pendant ine chiratidzo cheChinese che 'akaropafadzwa' pakati payo. Amai vemaparera vanomiririra Yin uye nhema onyx inomiririra Yang.
Gemstone: Nhema Onyx naAmai vePearl
Kureba: 33.35 mm * (1.31 inch)
Upamhi: 25.10 mm * (0.99 padiki)
Approx. Kurema: ~ 4.1 gramu *
Basa revatengi raishamisa. Vakatumira nekukurumidza zvakadaro. Vakanga vane mutsa zvikuru. Ivo vaive kunze kwezvinhu zviviri zvandaida asi vakatumira tsamba kwandiri ipapo neimwe sarudzo. Iyi ndiyo ichave nzvimbo yangu huru yandinotenga kubva!